China 34 uye 4 pini yekubatanidza vagadziri uye vanotengesa | Chapman
34 uye 4 pini yekubatanidza
✭ Chinobatanidza proxy kana chiputira chakakomberedza API iyo inobvumidza iyo yepasi sevhisi kutaura neMicrosoft Power Automate, Microsoft Power Apps, uye Azure Logic Apps. Iyo inopa nzira kune vashandisi kubatanidza maakaunzi avo uye kuwedzera seti yezve pre-yakavakwa zviito uye zvinokonzeresa kuvaka avo maapplication uye workflows.
✭ Chikamu chepurasitiki chakanyatso kukwirira, uye chinzvimbo chinowirirana chinoda kuitwa mukati mekushivirira kwe0.01-0.02mm. Chinyorwa chayo ndeye LCP isina moto V0 zvinhu.
✭ Ichi chigadzirwa chinoda kugadzirwa neyekumhanyisa-jekiseni jekiseni kuumbwa muchina, iine ipfupi jekiseni kutenderera uye yakakwira chigadzirwa kunyatso. Iyo jekiseni kutenderera inofanirwa kudzorwa mukati me15-25 masekondi kuona kuti saizi yega yechigadzirwa ichienderana.
✭ Zvinodikanwa zveforoma zvakare zvakakwirira kwazvo, uye chinzvimbo chechigadzirwa chinobatanidza chiteshi chinoda kugadzirwa chakaparadzaniswa muforoma, uye kushivirira kweimwe neimwe yekuisa kunofanira kuvimbiswa mukati mekushivirira renji ye055mm.
✭ Kana uine zvigadzirwa zvakafanana, Ndapota usazeza kutisangana nesu. Tichava shamwari yako yepamoyo.
Muforoma NO. CPM-150220
Pamusoro Pedza Maitiro ChiPolish- # 600
Zvinyorwa zvePurasitiki LCP
Chikamu uremu 3.5g
Dhizaini Software UG
Chikamu chemazana 48.00 * 14.1 * 8.2 mm
Saizi yekukura 250 * 300 * 321mm
Chikamu Zita 34 uye 4 pini yekubatanidza
Muforoma mhango 1 * 4
Mumhanyi Cold mumhanyi kune sub gate
Mould Material S136 / S50C / S-7
Mould Hupenyu Kutenderera Chiuru chemazana
Lead Nguva Mazuva makumi maviri nemashanu
Muforoma Kutenderera Nguva: 16's
Kubhadhara T T
1.Contact akagadzirwa kubva kune yakasimba mhangura chiwanikwa uye goridhe kuifukidza.
2.Couplers nemitezo yekugamuchira inowanikwa murima anodized aluminium, nylon kana simbi isina chinhu stainless
3.Plugs dzakaumbwa kune yekuwedzera inoshanduka tambo kuti igadzire imwechete-chidimbu kuvaka.
4.Plugs yakashongedzwa nesimbi yekukweshera mhete iyo inodzivirira kudzikira kwerabha uye inowedzera kudhonza-kunze kuramba ；
5.Receptacles akaiswa muhombodo ine magetsi giredhi epoxy ；
6.Mapini echirume ane rakaumbwa cork chisimbiso pazasi peumwe neumwe wekubata uyo anovimbisa mvura yakasimba uye guruva rakasimba zvakakwana kana zvikamu zviri kushandiswa.
7.Kuitirwa kuchengetedza kuenderana kwakaringana kana uchiita zvikamu zvevarume nevakadzi ；
8.Girini pini inowedzerwa iyo inovimbisa kubatana kwemagetsi kwakachengeteka nekuti ndiyo yekutanga pini yekuita uye yekupedzisira kuregedza ；
Iwo maConnectors netambo hazvingaruke kana kuremara munzvimbo ino yepamusoro tembiricha.
Kugadzira kukosha kwevatengi uye kuigadzira yakakwana uzivi hwedu. Iwe unozoona purofiti yakakura nekushanda pamwe chete neCPM!
Isu tine ruzivo mune ese marudzi esimbi uye fittings yenyika dzepasi rose
Kavha & Warehousing
Pashure: Tembiricha yekuyera mudziyo
Zvadaro: Fan rekumashure kavha
Diki chaiyo servo yekufambisa giya kuvhara